Guri | Wanzhanxing Apparel
Nabar uur leh
Dusha sare ee haanta leh & Camisole
Dharka Iibka Uurka
Legging-ka aan la tolo
Dharka Wanzhanxing waa soo-saaraha ugu fiican ee naqshadda qaabeeya, waxaan diirada saareynaa dharka aan kala go 'lahayn, qaabeynta qaabeynta, dharka caadiga ah, dharka lagu dhejiyo iyo soosaarka dhalmada. Alaabooyinkayaga waxaa ka mid ah warqadda dharka dharka ah, oo qaabeeya Toong, xakameynta panties, qaabeeyeheer bassit, Sports Bra iyo Leggings Sports. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku siin karnaa ODM& Adeegga OEM.
Haweenka WzX ee Haweenka Sawirka Haweenka ee 'WIMEWEAR'
Haweenka ayaa ka dhex dhacaa tababbaraha jirka oo dhameystiran qaabeynta qaabeynta qiiqa hooseeyaJidhkan jilicsan ayaa ka samaysan tayo sare leh, xariir, jilicsan oo jilicsan, iyo maro neefsasho, dhalaal neefsi ah oo ka kooban timaha ka kooban nylon iyo Spandex. Jidhkan caadiga ah waa la xiri karaa maalinta oo dhan, si sahlan u qaabeynta dhexda iyo qalooca misigta, waxay ku siineysaa shotter qalooca oo aad u muuqata mid aad u muuqata mid aan lahayn burooyin ama kufsiyo ama dhajiin koofiyad yar. jaantus, samaynta soojiidasho.
Wesx Haweenka Haweenka ee WzX waxay xakameysaa xamuul xasaasiyadeed
Haweenka Madada ee Isuduwaha Macaamiisha ayaa ka sarreeya Slow TempeWax oo dhameystiranHaysashada jilicsan ee haweenka u adeegsada farsamada qaaska ah Samee isku-dhafan oo ku saabsan qaybta dhexe, oo ku dheji dhexda& calool& Dhabarka, ku adkeyso calooshaada iyo gadaal, sidoo kale waad qarin kartaa kuuskuusyada iyo xirxiran labada dhinacba si aad u dhinto dhexdaada, ku siiya sawir qurux badan. Hay'adaan aan xabad lahayn ee dumarka leh birta leh waa naqshad qoyaan-qod hooseeya, laf-dhabarkaaga, naasaha, naaska, iyo wajiga si fiican loo gooyaa. Dumarka dumarka dumarka ah ayaa lagu xidhi karaa geeska aad ugu jeceshahay, kaas oo ka caawiya kor u qaadida xarkaha xabadka oo ay muujiso qaabka hoyga sexy saacad sexy.
Wesx Chucaph gaagaaban oo ka gaagaaban caloosha taageera caloosha om om om
Dhaqdhaqaaqa hooyada ee hooyada oo gaagaaban hoos udhaca dharkaaga aad u sarreeyaDharka dhashanka hooyada oo aan fiicnayn ee 'Sempeworts Uumple Playewear', dhabarka, iyo sinta hoos udhaca dharka, gabi ahaanba la xidhxiro cagaaran iyo buruq, iyo combo-finanka, iyo comfy-ka, waxay ku haysaa caloosha hooyada oo leh qol ku filan koraan. Naqshadeynta jilicsan ee jilicsan ee NYLONEWEAR oo aan lagu arki karin dharka dhalmada, si adag u aamin ah caafimaadka uurka. Hooyo waxay ku xidhi kartaa munaasabad kasta oo muhiim ah, qubeyska ilmaha, sawir-qaabiinta dhalmada, iyo sidoo kale xirashada maalinlaha ah.
Wesx dumarka buuxa ee WZX-ga oo buuxa ee SPAGHetti SPAGhetti Stapeear Pompewalear OM ODM
Xaashi buuxa oo loogu talagalay haweenka hoostiisa lagugu hayo dharka jilibka oo lagu hagaajin karoDharka tunic waxaa laga sameeyaa si khafiif ah oo ka samaysan waxyaabo neefsasho leh, dhar taabasho dhar ah ayaa jilicsan oo comfy ah. Waa wax aan macquul aheyn in laga hortago gariirada aan caadiga ahayn ee dharka lagu hayo ee dharka suufka xagaaga. Naqshadeeyadeeda quruxda badan waa dhar xagaaga caadiga ah oo leh suuxdin-xireenno-qabad ku leh Turdal oo qaloocsan oo ka dhigi kara soo bandhigida suufka ah ee suufka ah, iyo qaab-dhismeedka lakab ah ayaa ku daraya dareen xarrago leh oo aan arki doonin. Qaabka caadiga ah: qaabka toosan wuxuu ku habboon yahay tirooyinka dad badan, iyo in la tusayo cayrinta aasaasiga ah ee xeebta ayaa kaamil ah munaasabado dheeraad ah.
Adeegyada naqshadeynta / 7-maalmood caddeyn ah / cabirka-cabirka-barkadda / ilaalinta deegaanka
Dharka wanzhanxing co. Ltd. waa warshad la xaqiijiyay ee la xaqiijiyay ee BSCI. Waxaan macaamiisheenna siinaynaa qaab-dhismeed aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn, dhar-goysyada maalinlaha ah, dharka caadiga ah, qaabeynta ugu fiican ee caloosha iyo waxyaabaha ku dhegan, si loogu daro Adeegga Macaamiisha Caalamka. Waxaan bixinaa adeegyo naqshadeyn iyo dawarro marka loo eego codsiga macaamiisha ee kooxda isgaarsiinta xirfadeed.
Wax soo saarka aan soo saarnay waa dhammaan kaynta deegaanka.
Waxaan sameyn karnaa 7-maalmood caddeyn deg deg ah iyo daabacaadda astaanta gaarka ah.
Ma waxaad raadineysaa soo-saare aad u wanaagsan oo sawir-qaade ah? Halkan waxaan nahay, fadlan noo soo dir emayl ama Whapp iyo qof ka socda kooxdeena ayaa kugu soo laaban doona 12 saacadood gudahood.
Warshadda la Xaqiijiyay
Warshadda ayaa leh shahaadada BSCI. Yarn wuxuu leeyahay shahaadada Oeko-Tex.
Koox xirfadle ah ayaa abuuraya noocyo jilicsan oo naqshadeeya qaab dhismeedka jirka oo u habeeya macaamiisha shaqsiyadeed ee macaamiisha.
Mashiinada aan muuqan ee cabbirro badan
Aqoon isweydaarsi aan kala go 'lahayn oo leh 12 inji - 19 inji inji Santoni. Waxay soo saari kartaa cabbirro kala duwan iyo badeecado cabirka oo lagu daray.
Awood ku filan iyo gaarsiinta dhakhsaha leh.
In ka badan toban sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan rabshadaha dhoofinta.
Ku saabsan Samuel
Dharka wanzhanxing co. Ltd.
Dharka wanzhanxing co. Ltd. waa soo-saareyaal xirfadle ah oo xirfadle ah, oo daboolaya aag dhan 13,500 mitir oo laba jibbaaran, oo leh wax soo saar wax soo saar iyo wax soo saar oo ku filan. Waxaan bixinay OEM&Adeegyada ODM ee macaamiisha ka kala yimid adduunka oo dhan, USA, UK, CA, AU, DEC iyo KR, EC, ECT.
Warshadu waxay ku adkaysataa fikradda deegaanka deegaanka iyo ilaalinta deegaanka iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda ugu horumarsan si ay u siiso adeegyada astaantaada:
2. Aqoon-isweydaarsiga caqliga leh, oo leh 12 inji-inji -19 inji Stonton Mashiinnada Santoni laga soo dhoofiyey Talyaaniga.
3. Wadashaqeynta astaanta nilit, a oko-Tex100 oo shahaado ah oo shahaado leh.
4. Dheedka Dheecaanka Deegaanka iyo Dharka Dharka ee Kala-Dhuuga.
5. Caadada Adeeggaaga Nooca ah waxaa ka mid ah astaanta, xirxiran, astaanta astaanta, ECT.
6. Kooxda Adeegga Macaamiisha ee xirfad leh waxay bixisaa adeeg wax ku ool ah.
Waxaan nahay soo-saareyaal soo-saare oo xirfadle ah oo xirfadle ah. "Hal-abuurnimo, hufnaan, daacadnimo" waa adeega adeegga shirkadda iyo dhaqanka shirkadaha.
Waxaan rajeyneynaa iskaashi daacad ah oo daacad ah.
Waxaa kuu hubaysan adiga isbeddelada ugu dambeeyay ee dharka hoos-u-dhiska ah ee is-hoosaysiinta / dharka loo yaqaan 'omolesale placewaar' / dharka caadiga ah.
WZX Boorka-Free Qoyaanka-Caddaynta Real Show Company Shapewear Warehouse
WZX waa warshad BSCI takhasusay dhoofinta in ay dalal badan oo caalamka ah muddo 16 sano ah, waxay leedahay shabakad iibka caalamiga ah iyo tiro balaadhan oo ah macaamiisha ka kooban jumladlayaasha, dukaano, iyo noocyada adduunka oo dhan in 7 qaaradood iyo 53 dal.video ku saabsan yahay shaqo maalmeedka ee xirxirida our warshad ee, bakhaarka waa Carro-free iyo qoyaan-caddayn. marka alaabta mara oo dhanba kormeerka, waxay waxaa loo dhiibi doonaa waaxda this for Cabaynta iyo maraakiibta.Ma waxaad raadineysaa soo saaraha ah ee alaabta shapewear, nigis, ama dhalmada haweenka?Eeg dheeraad ah lahayn. Waxaad tahay meel sax ah!
WZX aan xuduud lahayn nigis saaraha Factory waa aTop Shapewear Shirkadaha iyo Shirkado Shapewear Daad.Tani waa video habka kaawiyadeysatid ah, shaqaalaha waa shaqo adag fadhiga kaawiyadeysatid ah.Waxaan leenahay geedi muunad aad u aasaasiga ah ee naga soo saarka shapewear, nigis, activewear, iyo dhalmada.Waxaan taageero adeega caadadii muunad sida design caadada iyo bixiyaan adeeg brand one-stop.Ku adkaysanaya inay soo saarayo alaab tayo sare leh ka dhigaysa noo helitaanka guusha. Oo waxaan jeclaan lahaa inaan si aad u hesho guul aad la.
WZX habka Design Sample of Barnaamijyada Custom Style for Machine OEM ODM aan xuduud lahayn saaraha nigis
Marka aan helno design, aan dib u eegi doona naqshado si aad u aragto haddii ay yihiin awoodaha noo soo saarta gudahood. Haddii ay tahay shay aan u xiiseynaya oo aad aqbashaan quote, tallaabada xigta waa habka ururinta. Our kuugga caadadii qorshee doonaa on computer ah in ay la yimaadaan barnaamij sheyga, ka dibna waxa uu ku xidhi doonaa mishiinka la barnaamijyada, mashiinka la arkeyn ay soo saari doonaan wax soo saarka ee ku xiran barnaamijyada, saamiga ugu horeysay yimaado ilaa.Daad Professional Shapewear-saareyaasha, Shirkado Shapewear jumlada, WZX aan xuduud lahayn saaraha nigis, Waxaan hubiyo tayada ugu fiican iyo qiimaha ugu yar, wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha naga fadlan la xiriir!
WZX Fast samatabbixi Good Xidhmada Prodessional saaraha
Waxaan nahay saarayaasha iyo kuwa alaabada xirfadeed ee Shiinaha, kuwaas oo ku takhasusay siinta alaabta oo tayo sare leh kartoo.waaxda xirxirida wuxuu ka kooban yahay in ka badan 70 shaqaale khibrad leh.kormeerka irbad lagu qaban doonaa ka hor inta alaabtii oo dhan waxaa xerad si loo hubiyo in ay jiraan alaabta birta ah ku lahayn alaabtii oo dhan xerad si loo xaqiijiyo badbaadada alaabta.Waxaan leenahay xal kaamil ah dhammaan dhinacyada habka jare ah: wax soo saarka si ay, gaadiidka wax, technology jare, iyo dayactirka mishiinka.Sida a Shapewear-saareyaasha Daad, xakamaynta lahayn, raaxo inay xirtaan, qiimaha macquulka ah ee jumlada.Just si xor ah u baaritaan!